Nin Cabsan Oo Kala Garan Waayay Xaaskiisa Iyo Sodohdiis KADIBNA U GALMOODAY - iftineducation.com
iftineducation.com – Haweeney ayaa ku eedeysay hooyadeed iney la jiifatay ninkeeda ,waxa ay sidoo kale cambaareysay ninkeeda oo aaday qolkii ay hooyadeed jiiftay badalka qolkeeda.
Gabar u dhalatay South Africa ayaa shegatay in markii uu waagu baryay iney sariirta ka weysay ninkeeda laakiin ay si la yaableh ugu aragtay isagoo kasoo kacaya sariirta hooyadeed “waxey ila aheyd wax adag”.
Ninkaan oo 31 jir ah oo kaso jeeda deegaanka Bloemfontein ayaa la xiray markii la sheegay inuu u galmooday sodohdiis .
Laakiin sodohda ayaa maxkanmada ka sheegtay in ninkan uusan wax dambi ah laheyn oo uu cabsanaa ,sidoo kale iyaduna waxaa ay sheegtay iney cabsaneyd aysana labadooduba xasuusan Karin wixii dhacay habeenkaas.
Hooyadan ayaa iyada xitaa ku eedeysay gabadheeda iney hada ka hor la jiifatay awoowgeed sidaa darteed waxaa ay maxkamada ka codsatay in kiiskaan la kansalo.
Bloemfontein Regional Court ayaa kiiska joojisay markii uu ninkaan qirtay inuu sodohdiis u galmooday balse uusan miirkiisu joogin oo uu uqaatay xaaskiisa